Valisoa tsy mivadika | Martech Zone
Valisoa azo amin'ny tsy fivadihana
Talata, Novambra 13, 2012 Sabotsy 10 Novambra 2012 Douglas Karr
Rehefa niasa tao amin'ny gazety aho dia nahatsapa foana fa nanao zavatra mihemotra izahay. Nanolotra herinandro malalaka maimaim-poana tamin'ny gazety izahay ho an'ireo mpanjifa vaovao. Nanana mpamandrika izay nandoa ny vidiny feno nandritra ny roapolo plus taona izahay ary tsy nahazo fihenam-bidy mihitsy na hafatra fisaorana aza… fa hanome olona tsy misy fahatokisana ny marika misy valiny avy hatrany izahay. Tsy nisy dikany izany.
Inona avy ireo tombony azony amin'ny fanentanana ny tsy fivadihan'ny mpanjifany? Ary inona no ilaina hanentanana ny tsy fivadihana? Manampy tokoa ny valisoa, saingy zava-dehibe kokoa ny mifantoka amin'ny zavatra toy ny fanomezana vokatra na serivisy tena tsara, ary fantatra amin'ny fananana serivisy ho an'ny mpanjifa ambony indrindra. Ny sary farany nataon'i Zendesk, Valisoa azo amin'ny tsy fivadihana, mampiseho ny tsy fivadihan'ny mpanjifa dia tena zava-dehibe. 78% amin'ireo mpanjifa tsy mivadika no manampy amin'ny fanaparitahana ny momba ny marikao, ary ny 54% dia tsy hieritreritra ny hifindra ho mpifaninana akory.
Tags: mpanjifa tsy mivadikavalisoa ho an'ny mpanjifatsy fivadihanaprograma tsy fivadihanaprograma valisoavalisoa